South Asia and Beyond: दरवारले जन्माएको, बहुदलले हुर्काएको, लोकतन्त्रले पुल्पुल्याएको र गणतन्त्रले शीरमा राखेको गोमनको बिष न्यायपालिकाले उतार्ला?
दरवारले जन्माएको, बहुदलले हुर्काएको, लोकतन्त्रले पुल्पुल्याएको र गणतन्त्रले शीरमा राखेको गोमनको बिष न्यायपालिकाले उतार्ला?
कार्की अख्तियार प्रमुख भएको ३ वर्ष ५ महिना मौनतापछि फिल्मी शैलीमा लडाकू प्रकरण देखापर्नु ‘ब्ल्याकमेलिङ’को अन्तिम अस्त्र प्रयोग भएको गन्ध आयो
— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) September 17, 2016
लोकमानको फाईल झै किन रंगशालाको घांस हराउदैन? गरिबको रोग हराउदैन? भूकम्पको पिडा र बाढी पिडितको त्रास बिलाउदैन, किन राज्यबाट भ्रस्ट हराउदैन?
— Manish Jha (@manishjhanepal) September 17, 2016
दरवारले जन्माएको, बहुदलले हुर्काएको, लोकतन्त्रले पुल्पुल्याएको र गणतन्त्रले शीरमा राखेको गोमनको बिष न्यायपालिकाले उतार्ने संकेत दिएको छ!
— Subhash Adhikary (@subry2000) September 16, 2016
लोकमान आजदेखि निलम्बन भैसके भन्दा पनि हुन्छ, अख्तियारका काम अब पूर्वाग्रह साँध्न र बार्गेनिङका लागि मात्र हुनेछन् ।
— Bipendra Karki (@Bipendraa) September 16, 2016
फाइल बनाउन करोडौ खर्च भएको थियो रे! फाइल हराउन कति खर्च भो होला?
— लछुमन (@Rijallaxman) September 16, 2016
इतिहास हेर्ने हो भने सर्वोच्चले अप्ठेरा स्थितिमा न्याय दिलाएकै छ । यो मुद्दामा पनि त्यसै होस् । शुभकामना । https://t.co/iKtNZxWz7s
— समीरमणि दीक्षित (@smadixit) September 16, 2016
अख्तियारले बिराटनगरको प्लेन अपहरण काण्डबारे छानविन गर्ला जस्तो लाग्न थाल्यो।#केयोमायाभन्नेचिजैयस्तैहो?
— रामेश (@RaameshKoirala) September 16, 2016
केही समय यता माओवादी र लोकमानप्रति समानरूपमा वफादार देखिएकाहरूलाई अब कुनै किसिमको निष्ठाको सङ्कट पर्ला कि नपर्ला?
+ यी महानुभावलाई अब भाटभटेनीबाट निस्किहाल्ने बाटो कसैले देखाइदिए हुने 🔜
सर्वोच्चको आदेशले त लोकमानको बहिर्गमनको पुर्वाभास दिएजस्तो छ नि। अादेशको पुरा पाठ पढौँ।https://t.co/7ydCo5z0na
— Indra Dhoj Kshetri (@indradhoj) September 16, 2016
म गलत भएको देख्न पाउँ
घाइते भयेछी मात्रै लडाकु रकम छानबिन हुनु आफुलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेहरुलाई छानबिन गरेर चोख्याउने खेलपनी हुनसक्छ |
— Kedar (@kedarsubedi) September 16, 2016
मुद्दा हाल्नेले ढोलक ठटाएर हल्ला गर्दैन । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि विगो र अभियोग सहित पत्रकार सम्मेलन गर्छ ।
— Krishna Gyawali (@krishnaktm) September 16, 2016
कक्षामा साथीको पैसा चोर्यो-सोध्दा बोलेन-आग्रह गर्दा फर्काएन-अरुलाई चोर लगायो-झोला खोतिलने भएपछि फुत्त झ्यालबाट मिल्कायो, के हो?#ImpeachMSK
'ओ करम उंगलीयोंमे गिन्ते हें, जुल्मका जिसका कोइ हिसाब नहीं' भन्थे जगजीत सिंहले,
अब जुल्मको पनि हिसाब होलाजस्तो छ, धन्य कर्मशील न्यायालय ।
लोकमानसित सती जान खुट्टा उचालेको अवस्थामा दुई थान दैनिक र तिनका सम्पादक फेला । के यो त्याग हो? लाज छोप्न अदालतको दुहाइ काड्दै छन् रे #Shame